BWA011-DS023-LT-10PD - Touch Screen 10 Port Docking Digital Evidence Management System - OMG Solutions
Rindrambaiko momba ny rafitra fitantanana porofo nomerika
Fomba fisintomana an-tsary: Docking Station dia mampiseho ny satan'ny fampidinana data, isan'ny fisie alaina, ary ny ora anaovana fampidinana avy amin'ny fakantsary tonta hita maso.
Fanadiovana angon-drakitra fakantsary: Ny Docking Station dia manadio ny angona voarakitra rehetra avy amin'ny BWC mifandray aorian'ny fisintomana ny angona rehetra avy amin'ilay fitaovana.
Avereno ny fampidinana: Raha tapaka ny fampidinana avy amin'ny BWC mankany amin'ny docking station dia hanohy ny fisintomana avy eo amin'ny toerana nijanonany farany ny fakantsary rehefa nifandray indray ny fakantsary.
Portal: Mampiasa ny maritrano Browser / Server ny rafitra hihaonana amin'ny filàn'ny maso tsy manam-paharoa. Ny data rehetra alaina dia tafiditra avy amin'ny docking station na tambajotra PC eo an-toerana amin'ny alàlan'ny Web Browser.
Mpampiasa sy vondrona: Ny mpampiasa tsirairay dia nomena fahazoan-dàlana manokana hiditra, hijery, hisintona, hitatitra ary hamafa ireo angon-drakitra nakarina.
Fampahalalana momba ny tranga: Ireo mpiasa nahazo alalana dia mety manampy antsipirian'ny tranga manan-danja, hametaka antontan-taratasy fanampiny sy rakitra hafa mifandraika amin'ilay tranga misy data voarakitra.
Sokajy tranga manokana: Ny sokajy Custom Insident dia nampiana amin'ny rafitra hihaona amin'ny lalàna sy politika tsy manam-paharoa ataon'ireo masoivoho.
Fametahana horonan-tsary: Ny data izay alaina dia azo asiana marika.
Data mihidy: Ny angon-drakitra saro-pady sintonina dia mety hohidiana mba tsy hidiran'ny mpampiasa tsy nahazo alàlana, tafiditra ao koa ny tompona angona.
Data voaaro: Ny data manandanja dia mety ho voaro amin'ny famafana mandeha ho azy na amin'ny tanana.
Fikarohana farany: Mitadiava mora ny angon-drakitra voarakitra an-tsoratra amin'ny alàlan'ny masontsivana fikarohana iray na marobe.
Tatitra momba ny statistika: Ireo mpampiasa nahazo alalana dia mety haka ny tahirin-kevitra momba ny tranga statistika isaky ny daty voatondro.
Làlana fanaraha-maso feno: Araho ny hetsika rehetra ataon'ny manamboninahitra sy ny mpampiasa na amin'ny docking station na amin'ny Web Portal.
Data backup: Ny tahirin-kevitra alaina dia azo aorina amin'ny mpizara rakitra voafaritra amin'ny alàlan'ny tambajotra (NAS). Ny admin dia mety hamorona politika manokana ho an'ny rafitra mba tsy handrindra afa-tsy angona manan-danja amin'ny NAS na amin'ny ankamaroan'ny mpizara fitehirizana.
Fanaraha-maso ny rafitra tena izy: Ny mombamomba ny Docking Station misy ny toerana fitehirizana anatiny, ny toeran'ny kapila, ny toetoetran'ny Internet, ary ny fahasalaman'ny angona dia arahi-maso amin'ny fotoana tena izy.
Fanamafisana ny fotoana: Docking Station dia manavao ny fotoana an'ny Camera Worn Camera rehefa mifandray ny fitaovana.
Fitehirizana eo an-toerana azo esorina: Mitantana sy mitahiry mora foana ny angona eo an-toerana & manafoana ny saram-pitahirizana isam-bolana. Ny fitehirizana ny rafitra dia mety hitarina ao anatiny sy ivelany.
Rindrambaiko System Rafitra fikirakirana Mandresy 10
Rindrambaiko fakana Rafitra fitantanana porofo elektronika momba ny lalàna mifehy ny finday
Fifaneraseran'ny Hardware Asehoy ireo singa LCD 10.1-inch, famahana ny vatana 1280 x 800
Touch Components Takela-pandrefesana capacitive multi-point
Main Chipset Dual-core CPU Intel chipset miaraka amin'ny safidin'ny processeur Intel Family hafa
Memory Capacity 4G DDR 1600/1333/1066 MHz (tsy voatery 8 ka hatramin'ny 16G).
Drive Hard System 60G SSD
Kapoka azo antoka Safidy 1T, 2,4T, 8T, 12T, 16T safidy fitehirizana.
Fandraisana interface Mini / Micro / karazana C-USB dia misy standard miaraka amin'ny 8 (tsy voatery 10)
Ampiharo endri-javatra Fitantanana fahazoana Fitantanana famehezana ny fisoratana anarana
Manohana ny fampitana tsindraindray ny fizotry ny fahazoana
Ny fandrosoana amin'ny fividianana sy ny fibaikoana dia aseho mavitrika
Ny fitaovan'ny mpanafika dia mifanitsy amin'ny seho fisehoan'ny efijery tsirairay
Ny isan'ireo fitaovana voaangona ho azy sy miaraka dia azo amboarina
Fitsipika momba ny fanamarinana izay mifanaraka amin'ny interface interface ho an'ny indostrian'ny fiarovana ny daholobe
Data Processing Ny rakitra horonan-tsary dia tsy manana kalitao sary namboarina
Fanasokajiana mandeha ho azy (miankina amin'ny karazana rakitra, ny famahana na ny daty)
Ampidino ho azy ny mpizara voatondro
Mampidirina configurable politika (vanim-potoana, adiresy ahatongavana, karazana rakitra, fantsom-pifandraisana, sns.)
Rehefa voamarina ho azy ny mpitam-boky dia voamarina ho azy ny satan'ny fahavitana ary alaina ho azy ny data
Storage Management Fitantanana ny politika fitehirizana (làlana fitehirizana, karazana rakitra fitehirizana, fomba faneriterena sns.)
Fitantanana ny habaka fitehirizana (fanadiovana, fampitandremana mialoha, fanitarana, backup sns.)
Miseho ny toerana fitahirizana
Ny tahiry dia tohanan'ny tsy tapaka
Fampidinana, jereo ny porofo
Data Security Ireo mpampiasa tsy nahazo alalana dia tsy manana zon'ny asa angon-drakitra
Fifanarahana data Fahadisoana + mekanika fampifangaroana angona data miaraka amina fifandraisana mavitrika sy tsotra amin'ny sehatry ny fitantanana
Fitantanana zon'olombelona Ny fahazoan-dàlana hierarchika tsy voafetra dia tantanina miverina
Fifandraisana anatiny Fitaovana fandefasan-kafatra eo no eo amin'ny Internet
Fikarohana porofo Ny porofo lehibe dia ampitaina hizarana ny didim-pitsarana
Fanombanana asa Fanombanana ny mpiasa, fanombanana ny vondrona
Fitantanana ny tranokala Fitantanana tranokala asa-maro
Log Management Fitrandrahana ala
Ny Interface Host Mifamadika lakilen'ny milina Fanalahidy ara-batana
Fifanarahana data Reny USB-Reny
Ny fananana ara-batana Power ACIN: 100 ka hatramin'ny 240V; 50 ka hatramin'ny 60Hz amin'ny fiarovana azo tsindriana, fiarovana mihoapampana, fiarovana mahery vaika, fiarovana fohy
Operating Temperature -20to60 degre Celsius
Asa fanetren-tena <90% amin'ny fotoana
Size X X 48 34 10 sm
Ny lanjan'ilay vokatra About 9kg
Mavesatra be ny vokatra Manodidina ny 10kg (fonosana baoritra).
Quality Assurance Material Shell Trano vy rehetra,, anti-static, anti-magnet, fanoherana herinaratra mahery vaika
Fanamarinana tsy maintsy atao Fanamarinana mandatory ny vokatra elektrika any Shina (3C).
Fitsipika momba ny tontolo iainana Ny singa sy kojakoja fonosana rehetra dia mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena momba ny tontolo iainana